TETIBOLAM-PANJAKANA NASIAM-PANITSIANA 2021: Nampitomboina ny tetibola ho an’ny sosialy, laharam-pahamehana ny any Atsimo – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 8:32
Nisy ireo nanatrika ny fivoriana tamin'ny alalan'ny ampitain-davitra.
Accueil/Politika/TETIBOLAM-PANJAKANA NASIAM-PANITSIANA 2021: Nampitomboina ny tetibola ho an’ny sosialy, laharam-pahamehana ny any Atsimo
Nodinihina sy nolanian’ny Solombavambahoaka ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana ho an’ny taona 2021 (LFR 2021) omaly 29 jona 2021. Natao teny amin’ny CCI Ivato sy tamin’ny alalan’ny fivorina ampitain-davitra ny fihaonana. Nivoitra nandritra ny fandraisam-pitenenana nifandimby maha antoka ho amin’ny fanarenana ny toekarena sy ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ny fandaniana ity LFR 2021 ity.
Lucien R. 30 juin 2021
Solombavambahoaka 87 tamin’ireo tonga nanatrika ny fivoriana no nandany ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bola nasiam-panitsiana taona 2021 omaly. Tsy nisy kosa ireo nitsipaka, raha toa ka 2 no tsy nilaza ny heviny. Araka ny fanazavan’ny Filohan’ny Vondrona Parlemantera IRD, ny Depiote Paul Bert Velontsara, dia namela takaitra amin’ny lafiny maro ny fandalovan’ny covid-19. Ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana 2021 noho izany dia mametraka ho tanjona ny fanarenana ny toekarena sy ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ary fanohizana ireo ezaka rehetra mba hisian’ny fisandratan’I Madagasikara. Izy izay nilaza fa anisany niompanan’ny fanitsiana natao ny mbola fisian’ny valanaretina Covid-19, ny fanatsarana ny fitsinjaram-pahefana, ary ny fanatanterahana ireo vinam-pampandrosoana samihafa.
1,5% ihany ny an’ny Minisiteran’ny Fanatanjahantena
Isany tena misongadina ao anatin’ity tetibola nasiam-panitsiana ity ny fampiakarana ny tetibola amin’ny sehatra sosialy. Araka ny tatitry ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola dia mitentina 82,2 miliara ariary vola fanampiny ho an’ny sehatry ny sosialy ka anisany hahazo anjara amin’izany ny Minisiteran’ny Mponina, ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fampiroboroboana ny vehivavy. Eo koa ny fanampiana ny orinasa Jirama sy ny “caisse de retraite”. Nampidinina kosa ny tetibola ho an’ny “fonds souverain”, izay napetraka ho 142,2 miliara ariary ho an’ny taona 2021. Araka ny nambaran’ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Richard Randriamandranto, dia ny 1,5%-n’ny tetibolam-panjakana ihany no an’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena. Mbola ambony mihoatra lavitra an’izany anefa, hoy izy, ny an’ny Minisiteran’ny Fahasalamana sy ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Harin-karena faobe 4,3%
Araka izany dia tafiditra amin’ny laharam-pahamehana ao anatin’ity LFR 2021 ity ny fanamboarana sy fanatsarana ny lalam-pirenena izay hahafahana mampiakatra ny vokatra, ny fampandrosoana ireo “zones d’émergence industrielle”, ny fanatanterahana ireo fanamby ho an’ny Faritra Atsimo, ny fametrahana indostria eny anivon’ny distrika rehetra ary ny fampitaovana sy fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana. Etsy ankilany, raha 4,5% ny fiakaran’ny tahan’ny harin-karena tamin’ny LFI 2021, dia nidina 4,3% izany amin’ny LFR 2021. Marihina fa – 5,7% izany tamin’ny taona 2020 ary 4,4% tamin’ny taona 2019.
Asa ho an’ny any Atsimo
Nandritra ny fihaonana tamin’ny Depiote omaly no nitanisan’ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanambola ireo tetikasan’ny Fanjakana efa voasoritra ao anatin’ny LFR 2021 fa hotanterahina any Atsimo. Voalohany amin’izany ny fametrahana ny rano fisotro madio amin’ny alalan’ny Pipeline eo Mandrare Sampona Efaho. Eo koa ny fanamboaran-dalana, dia ny RN13, RN12A, RN10. Ho tanterahina koa ny fametrahana “parc solaire” mirefy 70 000ha ao Androy sy Anosy sy ny fanamboarana ny centre de rehabilitation nutritionnelle et médicale (CRNM). Eo amin’ny lafiny ara-pahasalamana, hisy ny fanentanana momba ny fandrindram-piterahana sy ny fananganana hopitaly. Hatsangana koa ny ozinina mpamokatra sakafo. Etsy ankilany, hotohizana ny fananganana sekoly any amin’ny faritra atsimo. Hapetraka ireo kianja manarapenitra. Hitohy koa ny fametrahana ireo toby miaramila eny ifotony sy ny fanomezana angidim-by ireo mpampandry tany. Eo amin’ny lafiny fitsinjaram-pahefana, hisy ny fanorenana ireo biraon’ny kaominina any Atsimo. Ho an’ny fambolena, hisy ny fizarana ny titre vert izay ho an’ny fianakaviana miisa 2000, ka tany mirefy 200ha no hotsinjaraina amin’izany. Hamafisina koa ny ady amin’ny fanimbana ny tontolo iainana. Hisehatra any Atsimo koa ny tetikasa fihariana ka hanampy tosika ny fambolena mangahazo amin’ny velarantany 70 000ha.
FIVAROTANA TANY TSY ARA-DALANA: Tany miisa 09 naverina ho an’ny tanànan’Antananarivo
TETIKASA TANAMASOANDRO : Velaran-tany mirefy 980ha no hametrahana ny tanàna vaovao
GUO XIAOMEL : Masoivohon’i Chine vaovao hiasa eto Madagasikara